ကမ္ဘာ့ရေ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြန်မာပြည် | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ကျေးရေ (ခေတ္တ ကယ်လီဖိုးနီယား)
မိုးမခလောကဓာတ်ခန်း၊ စာတမ်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂
● သောက်သုံးရေနှင့် ကမ္ဘာမြေ
ရေအရင်းအမြစ်ဆိုသည်မှာ လူနှင့်ပတ်ဝန်ကျင်အတွက် (သောက်သုံးရေစိုက်ပျိုးရေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံသုံးရေ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်သုံးရေ စသည့်လိုအပ်ချက်များ) လိုအပ်သလို စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်သောရေ (မြေပေါ်ရေနှင့် မြေအောက်ရေ) ကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ ကမ္ဘာ့ရေထု၏ ၉၇.၅ ရာခိုင်နှုန်းသောရေ (ပင်လယ်ရေနှင့့်ဒီရေအတက်အကျရှိသည့် ပင်လယ်စပ်အနီးအနားရှိ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များ၊ ဆားငံရေအိုင်များ နှင့် အငံဓါတ်ပျော်ဝင်နေသောမြေအောက်ရေ) တို့သည် သောက်သုံး၍မရနိုင်သော ရေငံများဖြစ်ပါသည်။ ကျန်၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းသောရေသည်သာ သောက်သုံးနိုင်သော ရေဖြစ်ပါသည်။ ထိုသောက်သုံးနိုင်သောရေများ တွင် ရေခဲမြစ်များ၊ ရေခဲတောင်များ၊ မြေပေါ်ရေချိုနှင့် မြေအောက် ရေချိုများ ပါဝင်ပါသည်။ ရေခဲမြစ်များ၊ ရေခဲတောင်နှင့် နှင်းတောင်များမပါဝင်ပါက အမှန်တကယ်သောက်သုံးနိုင်သည့် ရေပမာဏမှာ ၀.၇၈၅၀ ရာခိုင်နှုန်း (မြေပေါ်ရေ-၀.၀၃၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်မြေအောက်ရေ- ၀.၇၅၂၅ ရာခိုင်နှုန်း) သာလျှင်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ သောက်သုံးနိုင်သောကမ္ဘာရေထုပမာဏ၏ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်စိုက်ပျိုးရေအတွက်၊ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် စက်ရုံအလုပ်ရုံ အ တွက်နှင့်လူအများသောက်သုံးရေအတွက် ၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာလျှင် အသုံးပြုနေကြကြောင်း၊ ယ္ခုအခါ ကမ္ဘာလူဦရေသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှတ် တမ်းများအရ- ၇ဘီလျံကျော်ရှိနေရာမှာ ၂၀၂၅ တွင် ၉ ဘီလျံကျော်ရှိလာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားကြပါသည်။ ကမ္ဘာလူဦရေတိုးနှုန်းမှာ ၁.၁%ခန်ဖြစ်ပြီး၊မြို့ပြဖွံဖြိုးမှုများမှာ လည်းလျှင်မြန်စွာ တိုးတက်နေကြောင်း၊လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်ရှိမြို့ပြလူဦရေမှာ၂.၈ ဘီလျံမှ ၂၀၂၅ တွင်လူဦ ရေ ၄.၅ ဘီ လျံရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ လူဦရေတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ရေလိုအပ်မှုပမာဏပိုမိုများပြားလာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံဖြိုး မှု အစီအစဉ်၏မှတ်တမ်းများက ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ယ္ခုကာလကမ္ဘာကြီးသည် ရာသီဥတုပြောင်းလွဲမှုများ၏ အကျိုးအဆက်များဖြစ်သည့် မိုးခေါင်ရေရှားမှု၊ ရေကြီး ရေလျံခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော သောက် သုံးရေရှားပါးလာခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ခံစားနေရခြင်းနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ တိုးတက်များပြားလာသော လူဦးရေများ၏ အရေးတကြီးလိုအပ်သော သောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများသည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနည်းဖြင့် သန့်ရှင်း သည့်သောက်သုံးရေရရှိရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ပေးနေကြရပါသည်။ အဆိုပါ ရေအရင်းအမြစ်များ လုံခြုံရေးသည်လည်း အရေးကြီးပေသည်။ သို့မှသာ ပြည်သူလူထုအတွက်သောက်သုံးရန်သင့်တော်သော၊ သန့်စင်သော၊ ဘေးအန္တာရာယ်မရှိ စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်သောရေ (Portable, clean and safe water) ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
● ကမ္ဘာ့ရေနေ့ (World Water Day) မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်
၂၀၁၂ ခုနှစ်မတ်လ-၂၂ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၌ကမ္ဘာရေ နေ့တွင်ပြောကြားသောမိန်ခွန်းတွင် – ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ လူတိုင်း လူတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ လိုအပ်ချက်သည် အဓိကအရေးကြီးဆုံး အချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီသည်လည်း သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေသည် အဓိဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ရေသည်သောက်သုံးရန်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံသုံးရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးသုံးရန်သာမက စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လူတန်းစားအလွှာအသီးသီး၏အခြေခံအလိုအပ်ဆုံး သော အရာဖြစ်ပါသည်။
ထိုကြောင့် ရေသည်တကမ္ဘာလုံး၏ အာရုံစိုက်ရာဖြစ်ရာပြီး ရေပြသာနာကို မိမိနယ်မြေဒေသအလိုက် ဖြေရှင်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလူဦးရေနှစ်သန်းကျော်သည် မသန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေကြောင့် သေဆုံးနေရ ကြောင်း၊ သို့ပါ၍ဖြစ်နိုင်မည့်နည်းဖြင့် သန့်ရှင်းသည့်သောက်သုံးရေရရှိရေးနှင့် ပတ်ဝန်ကျင်သန့်ရှင်းရေးကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ကျမ္မာခြင်းနှင့်ပြည်စုံသောဘ၀ကိုရရှိပြီး၊ သန်းနှင့်ချီသောပြည်သူလူထုအတွက် မသန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေကြောင့် သေဆုံးနေရသူ များ နည်းပါးလာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများနှင့် တိုးတက်ဆဲနိုင်ငံများရှိ အမျိုးသ္မီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များသည်လည်း သောက်သုံးရေ သယ်ယူရသည့်အချိန်အစား ကျောင်းသို့သွားနိုင်ပြီး အမျိုးသ္မီးများသည်လည်း မိသားစုဝင်ငွေအတွက် တဖက်တလမ်းမှ အခွင့်အရေးများရလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ပြည်သူလူထုအတွက်သောက်သုံးရေကို အချိန်မကုန်ဘဲ လွယ်ကူစွာရရှိစေခြင်းသည် အလုပ်အကိုင်များ တိုးတက် ပေါများပြီး ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တချိန်ထဲမှာဘဲ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်စားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီအကြောင်းခြင်းရာများကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် စဉ်းစားလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာဘဲ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း အနောက်တောင် အလယ်ပိုင်း၌ သဲကန္တာရဆန်နေပြီး အရှေဘက်ချမ်း၌ ရေကြီးရေလျှံခြင်းများ ကြုံတွေနေရပါသည်။ သို့ပါ၍ တစ်ကမ္ဘာလုံး၊ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ၇ရှိရေးအစီအစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနှင့် ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများရှိနေသော ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများကို WASH (Water Sanitation and Hygiene) Project စီမံကိန်းအစီအစဉ်ဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူပေါင်း၍ ရေရရှိရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲများအား အရေးတကြီး လုပ်ကိုင်ဖြေရှင်းပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ မည်သို့မည်မျှလုပ်ဆောင်ပေးနေသော်လည်း ယ္ခုကမ္ဘာလူဦရေတိုးနှုန်းအရ လာမည့်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၅တွင် လူဦရေသန်း ၇၀၀ ခန့်သည် သန့်ရှင်းသည့် သောက်သုံးရေရရှိရေး အခက်အခဲများ ရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာလူဦးရေ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သောက်သုံးရေလိုအပ်မှုသည်လည် မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သော်လည်း သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ တည်ရှိမှုမှာ တိုးတက်မလာနိုင်ကြောင်း ၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ ရာသီဥတုပူပြင်းလာခြင်းတို့ကြောင့် မြေပေါ်ရေ (မြစ်ချောင်း၊အင်း၊အိုင်များ၏ ရေမျက်နှာပြင်များ) မျက်နှာပြင်များ နှိမ့်ကျလာပြီး၊မြေအောက်ရေများသည်လည်း စိုက်ပျိုးရေနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံသုံးရေအဖြစ် ထုတ်ယူမူများကြောင့် သောက်သုံးရေအတွက် နည်းပါးလာနေကြောင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ စက်ရေတွင်းများ(အ၀ိစီတွင်း)သည် လာမည့်ရာစုနှစ်များအတွင်း ခမ်းချောက်သွားနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ ဇလဘူမိဗေဒပညာရှင်များက ပြောကြားသည်ကိုလည်း ညွန်းဆိုထားပါသည်။
ထိုကြောင့် ရေနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို စနစ်တကျ၊ အသေးစိတ်စုဆောင်းထားဘို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ လိုအပ်ပါက နေရာဒေသအလိုက် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်အဖွဲအစည်းမဆို စနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်းရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းအတွေအကြုံရှိသောသူများ၊ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များကိုလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်စေရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖိတ်ခေါ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဖြင့်အမေရိကန်နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ရေပြသာနာ ကြုံတွေ့နေသည့်နိုင်ငံများကို တတ်သည့်နားလည်သောနည်းပညာနှင့် သင်တန်းများ၊ အတွေအကြုံများကို ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မည်ဟု ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။
● ရေသည် လက်နက်၊ အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ အန္တရာယ်
ထိုအပြင် ကမ္ဘာရေနေ့မိန်ခွန်းတွင် အမေရိကန်ပြည်တောင်စုနှင့် နိုင်ငံတကါအဖွဲ့အစည်းများ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကို ကိုးကား၍ ထပ်လျောင်းပြောကြားရာ – သက္ကရစ်၂၀၂၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် သောက်သုံးရေကိုအကြောင်းပြု၍ ရေကို လက်နက်သဖွယ်အသုံးပြုခြင်း၊ အကြမ်းဖက် လုပ်ငန်းသုံးကရိယာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တစ်ပြည်နယ်နှင့် တစ်ပြည်နယ်၊ တနိုင်ငံနှင့် တနိုင်ငံ(သို့) နိုင်ငံအချင်းချင်း၊ ဒေသအတွင်း တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လါနိုင်စရာအကြောင်းများ ရှိနေကြောင်း၊ ထိုသို့ဖြစ်လါနိုင်သည့် အခြေခံအကြောင်းများမှာ ရာသီဥတုဆိုးဝါးလါခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးလာခြင်း၊ သောက်သုံးရေရှားပါးလာခြင်း၊ သောက်သုံးရေ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းလာခြင်းတို့နှင့်အတူ ဆင်းရဲမွဲတေးမှုများလာခြင်း၊ လူမျိုးရေး၊ လူတန်းစားတင်းမာမှုများလာခြင်း၊ စနစ်တကျဦးဆောင်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုမပြုနိုင်သောသူများ ခေါင်းဆောင်သည့်အစိုးရအဖွဲ့များကြောင့် မိမိတိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်များကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမှုများ၊ ဦးတည်လာစေနိုင်ပါမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
ထိုအခြင်းအရာများ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်း ရှိကြောင်း၊ နယ်မြေချဲ့ထွင်ပိုင်းစိုးလိုသူများးနှင့် လူမျိုးရေး တင်းမာသူများကလည်း ရေနှင့်သက်ဆိုင်သော အဆောက်အဦများ၊ (ရေလှောင်ကန်၊ ရေအားလျှက်စစ်စက်ရုံစသည်တို့) ကိုဖျက်စီးမည်ဟု ချိန်းခြောက်လာနိုင်ကြောင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်မလာနိုင်ပေမဲ့ ရာသီဥတုဖေါက်ပြန်မှုကြောင့် မြစ်ရေများ အဆမတန်ကြီးခြင်း၊ ဆည်မြောင်းများ ရေလျံခြင်း။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့် ဆည်မြောင်းများ၊ မြစ်ရေများ ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်များ ဆုံးရုံးမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း။ ထိုအကြောင်းအရာများက ပြည်သူလူထုနှင့် အစိုးရကို စိုးရိမ်စရာ၊ ငွေကုန်ကြေးကျများစရာများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ ထိုကြောင့် ရေအရင်အမြစ်များကို ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုးရိမ်စရာအရေးကြီးသော လုံခြုံရေးကိစ္စတစ်ခုအနေနှင့် စဉ်းစားရမှာဖြစ်ကြောင်း။
ထိုကဲ့သို့စိုးရိမ်မှုများသည် မည်သည့်နိုင်ငံများတွင်ဟု အတိအကျမပြောဆိုနိုင်သော်လည်း၊ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ မြေပေါ် ရေအရင်းအမြစ်များ (မြစ်ချောင်း အင်းအိုင်၊ ဆည်မြောင်း၊ ရေအားလျပ်စစ် ရေကာတာများကို အလေးထား လေ့လာထားရာ၊ အာရှတိုက်မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှရှိ မဲခေါင်မြစ်(Mekong)။ အီရတ်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ တီကရစ်မြစ်နှင့် ယူကရေးတီမြစ်များ(Tigris and Euphrates) ။ အိန္ဒိယနှင့် တောင်အာရှရှိ အိန္ဒုမြစ်နှင့် ဗြမ္မာပုတ္တရမြစ် (Indus and Brahmaputra)၊ အမူဒါယာမြစ် (Amu Darya) တို့ ပါဝင်ပါကြောင်း၊ ပထ၀ီဝင်အနေအထားအရ၊ မြစ်ကြောင်းမြစ်ဝှမ်းများဒေသ အပေါ်ပိုင်းရှိ နိုင်ငံများ (မြစ်အထက်ပိုင်းနိုင်ငံများ) သည် မြစ်အောက်ပိုင်းနိုင်ငံများထက် ပိုမို၍ အခွင့်အရေးသာကြောင်း၊ ရေကြောင်းစီဆင်းမှုကို နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်မှုအနေနှင့် ကန့်သတ်ထိမ်းချုပ်နိုင်ကြောင်း။ အဆိုပါအချက်အလက်များသည် တိုင်း၊ နိုင်ငံ၊ ပြည်နယ်များ မတည်ငြိမ်မှု၊ ပျက်စီးဆုံးရုံးမှုများ၊ များပြားလာပြီး၊ ဒေသအတွင်း တင်းမာမှုများကိုလည်း ပိုမိုဆိုးရွားလာစေမှာဖြစ်ကြောင်း၊သို့ပါ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဦးဆောင်၍ အမေရိကန်၏ ရေအသင်းအဖွဲ့၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် (new U.S. Water partners) သစ်များအား အမေရိကန်၏ ရေနှင့်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုများကို ကျန်ရှိနိုင်ငံ များသို့ မျှဝေပေးရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ ရေ နှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာ ဖွေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြောကြားသွားပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်တောင်စုအနေနှင့် ကမ္ဘာဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရေအရင်းအမြစ်များ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များ ချမှတ်ထားရာ ယူအက်(စ်)အေအိုင်ဒီနှင့် နာဆာတို့ပူးပေါင်း၍ ဂြိုလ်တုနည်းပညာအကူအညီဖြင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာလျက်ရှိပါသည်။ ရေကိုအကြောင်းပြု၍ မလိုလားအပ်သော စိမ်ခေါ်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းများ ရှိလာနိုင်မည့်နေရာဒေသများကိုလည်း စောင့်ကြည့်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာရေနေ့ (worldwater day) ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းတွင်ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။
● လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်က ခန့်မှန်းချက်နှင့် နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော် သုံးထောင်က သမိုင်းသာဓက
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅- ၃၀ခန့်က ကမ္ဘာ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊သုတေသီများနှင့် နိုင်ငံရေးသ္မားများနှင့် ထိုစဉ်က ကုလ သမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘူထရိုဂါလီနှင့် ကိုဖီအာနမ်တို့၏ ခန့်မှန်းချက်သည်လည်း ၊ နောင်အနာဂတ် ၂၁ ရာစု နောင်းပိုင်း ကာလများ၌်၊ အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် လူဦရေ အဆမတန် တိုးးပွားလာမှုနှင့် လူတို့အတွက် လိုအပ်သော သောက်သုံးရေရှားပါးလာမှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါး လာမှု့များကြောင့် သောက်သုံးရေကို အကြောင်းပြုပြီး အကြမ်းဖက်မှုများ၊ မလိုလားအပ်သော စစ်မက်အရေးအခင်းများ ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်း ရှိကြောင်း၊ Water Resources (Wikipedia) the Free Encyclopediaတွင် လည်းဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်း သောက်သုံးရေကို အကြောင်းပြု၍ ကေါလိယပြည်နှင့်ကပိလ၀ိပြည်၊ (ယ္ခု အိန္ဒိယတိုက်) နှစ်ပြည်ထောင် စစ်မက်အရေအခင်း ဖြစ်မည့်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ ဘုရားက သွားရောက် တရားဟော ဖြန်ဖြေပေးခဲ့ရကြောင်း ဖတ်သားဖူးပါသည်။
လူသားအများစုကသာလျှင် သောက်သုံး၍ရသောရေကိုိ စနစ်တကျမသုံးစွဲခြင်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံထုတ် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများအား မြစ်ချောင်းများအတွင်း စွန့်ပစ်ခြင်းဖြင့် သောက်သုံး၍ မရနိုင်အောင် ပြုလုပ်ကြခြင်း၊ ရေနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေကို အကြမ်းဖက်လက်နက်ကရိယာအဖြစ် အသုံးပြုလာနိုင်ခြင်း များကို တားဆီးနိုင်လျှင် လူသားအားလုံးအတွက် အလိုအပ်ဆုံးသော သောက်သုံးရေကို အမြဲရယူသုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
ကမ္ဘာရာသီဥတုမှတ်တမ်းများတွင် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ သည် လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များ အတွင်း အပူဆုံးနှစ်ဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံ ပညာရှင်များက မှတ်တမ်းတင်ထားရပြီ၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမှုမှာ ၁၈၇၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ၁၇ စင်တီိမီတာ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိပင်လယ်ရေမြင့်တက်နှုန်းသည် ၁.၇ စင်တီမီတာ ရှိကြောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ကုလသမဂ္ဂမှ ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားသော ရာသီဥ တုပြောင်းလွဲမှုကို လေ့လာသည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) ၏ ဥက္ကဌ ရာ ဂျင်ဒ ရာ ပချူရီ (Rajendra pachauri) က ရာသီဥတုပြောင်းလွဲမှု၏ သက်ရောက်မှုများသည် ပို၍ ပို၍ စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာကြောင်း၊ ပင်လယ်ရေ မြင့်တက်လာမှုသည် ၂၁ ရာစု နောင်းပိုင်းတွင် ၅၉ စင်တီမီတာထိ တိုးမြင်လာနိုင်ကြောင်းပြောကြားသွားပါသည်။
ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လွတ်မှုများ ပိုမိုများပြားလာခြင်းက အဓိက အကြောင်းအရင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားပါသည်။ (လန်ဒန်မှ လေ့လာရေးအဖွဲ့ သုတေသနပြုချက်အရ အန္တာတိတ်နှင့် ဂရင်းလန်းဒေသရှိ ရေခဲတောင် များ အရည်ပျော်မှုကြောင့် ၁၉၉၂ မှ ယ္ခုအထိ ၁.၁ မီလီမီတာ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကြောင့် ကမ္ဘာမြေနှိမ့်ပိုင်းဒေသများ ရေလွမ်းမိုးမှုများ ပိုမိုဖြစ်လာစရာအကြောင်း ရှိကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က အာရှသတင်းစာတွင်လည်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။)
ကမ်ရိုးတန်းဒေသများသည်လည်း ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်မှုကြောင့် ရေလွမ်းမိုးမှုများ ကြုံတွေရခြင်း၊ မြစ်ရေလျံခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ ရေငံတိုးဝင်မှုများကြောင့် ရေချိုများ သောက်သုံးမရ ဖြစ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပေမည်။
ကမ္ဘာရာသီဥတု ပြောင်းလွဲလာမှုနှင့်အတူ ကမ္ဘာကြီး ပိုမိုပူနွေးလာသည်နှင့်အမျှ မိုးရွာသွန်းမှု လျော့နည်းလာ၍ အငွေ့ပြန်နှုန်းပိုမိုလာပြီး ရေအရင်းအမြစ်များသည်လည်း ရေပမာဏ လျော့နည်းလာကာ ရေအရည်အသွေးများ ကျဆင်းလာပေမည်။ ထိုအခါ ရေလိုအပ်မှု ပိုမို များပြားလာပေမည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများသည်လည်း အထွက်နှုန်းများ ကျဆင်းလာမည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးရေအတွက်ပါ ရေလိုအပ်ချက် များပြားလာပေမည်။ အဆိုပါအချက်အလက်များက ရာသီဥတုနှင့် ရေအရင်းအမြစ် (မြေပေါ်ရေ၊မြေအောက်ရေ) ဆက်နွယ်မှုရှိနေကို ပြဆိုပါသည်။
၂၁ ရာ စုအတွင်း ကမ္ဘာရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာမှုနှင့်အတူ ကမ္ဘာကြီးပိုမိုပူနွေးလာမှုကြောင့် ရေအရင်းအမြစ်များကို များစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြေပေါ်ရေသာမက မြေအောက်ရေပါ ပျက်စီးစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပျက်မှုသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ပိုမိုတိခိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ထိုကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ပိုမိုပူနွေးလာသည်နှင့်အမျှ ပူအိုက်စွတ်စိုသော အီကွေတာရာသီဥတုသည်လည်း နေရာအနံ ပြန့်နှံလာပြီး ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယ္ခုအချိန်အထိ တနှစ်လျှင်ဟာရီကိန်း ၁၀ ကြိမ် ဖြစ်ပြီး၊ ၂ ကြိမ်မှာ ကြီးမားပြီး ကြောက်စရာကောင်းကြောင်း၊ ပြော ကြားသွားပါသည်။ နောက်နှစ်များမှာ ကြောက်စရာနှင့် ကြီးမားသော ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ၄ ခုခန့် ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်ထားပါသည်။
ကမ္ဘာမြေကြီး၏အပူချိန်သည် ၁၈၈၀ ခုနှစ်ကစ၍တဖြေးဖြေးတိုးတိုး လာရာ၂၀၀၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကစ၍ သိသိသာသာ တိုးမြင့်လာသည်ကို တွေရကြောင်း။ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အနီး လေထုအပူချိန်မှာ ၁၉၈၀ ခုမှစ၍ ယနေ့အထိ နှစ်စဉ်ိ ၀.၆ ဒီဂရီ စင်တီဂ၇ိတ် တိုးမြင့်လာကြောင်း မှတ်တမ်းများက ပြဆိုထားပါသည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ (၁၉၆၁ – ၁၉၉၀) အတွင်း (၁၄.၀) ဒီကရီ စင်တီဂရိတ် ရှိခဲ့ပြီး ယနေ့၂၀၁၂ -ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အပူချိန်မှာ (၁၅.၆၇) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိလာကြောင်း ၊အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and National Climate Data Center (NCDC) မှ မှတ်တန်းများက ပြဆိုထားပါသည်။
မိုးလေ၀သနှင့် ရာသီဥတုသည် တနှစ်ထက် တနှစ် ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်ကြောင်း၊ ထိုအကျိုးအဆက်ကြောင့် ကောက်ပဲသီနှံများ ဆုံးရုံမှု များပြားလာနိုင်ကြောင်း၊ လေမုန်တိုင်းကြောင့် အိုးအိမ် အဆောက်အဦများ ပျက်စီးပြီး လူများ သေကြေပျကိစီးမှု ပိုမိုများပြားလာနိုင်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာလေထုအတွင်း ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓါတ် ပါဝင်မှုနှုန်းမှာလည်း ယနေ့ တွက်ယူရရှိသည့် ၇၁၇ ပီပီအမ် (Part per million) မှ နှစ်ဆခန့်ဖြစ် လါနိုင်ကြောင်း၊ ထိုကြောင့် ယခုအခါ တွေကြုံနိုင်မည့် အန္တရာယ်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်အနှစ် ၅၀ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာကလေယူနီဘာစီတီမှ သုတေသနပညာရှင် Mullers က ပြောကြားသွားပါသည်။
ယ္ခုအခါကမ္ဘာကြီး၏အရောင်မှာအာကာသမှကြည့်ပါကအ၀ါရောင်မှအနီရောင်သို့ပြောင်းလာနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ပြောသွားပါသည်။
ထိုကြောင ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓါတ် ထုတ်လွတ်မှုကို အများဆုံး လျော့ချရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရာသီဥတုနှင့် ရေအရင်းအမြစ်များ (မြေပေါ်ရေ၊မြေအောက်ရေ) သည်လည်း ဆက်နွယ်မှုရှိနေပါကြောင်း၊ ထိုကြောင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေသည် ရာသီဥတုပြောင်းလွဲမှု၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ခံစါးရ လွယ်ကူကြောင်း၊ မုန်တိုင်းများ၊ ရေကြီးချင်းများကြောင့် ရေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်နွမ်းပျက်စီးစေနိုင်ပါကြောင်း ညွန်းဆိုထားပါသည်။
● မြန်မာနိုင်ငံ ရေသယံဇာတ
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရေအရင်းအမြစ်များစွာ ကြွယ်ဝသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ်တောင်း၊ လေးမြို့မြစ်၊ မြစ်သာမြစ်၊ မြစ်ငယ်မြစ်နှင့် မဲခေါင် (သံလွင်) မြစ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရ မြစ်များဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်နှင့် လူထုအတွက် အသုံးဝင်သောမြစ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ အဆိုပါမြစ်များသည် မုတ်သုန်ရာသီဥတုနှင့် မိုးရွာသွန်းမှုအရ ရေတက်ရေကျနှင့် ရေစီးဆင်းလျက်ရှိသော မြစ်များဖြစ်ကြပြီး ရာသီအလိုက် ရေအရည်အသွေး ပြောင်းလဲမှုများ ရှိနေပါသည်။
မြေပေါ်မြေအောက် ရေအရင်းအမြစ်များ၏ ရေပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုသည် မိုးရေသာ အဓိက ဖြစ်ပြီး အရှေ့ရိုးမနှင့် အနောက်ရိုမများတွင် ရွာသွန်းသောမိုးရေများ စီဆင်းစိမ့်ဝင်မှုမှ တဆင့် ရေပြန်လည်ဖြည့်တင်းနေပါသည်။ အချို့သောနေရာအနည်းငယ်တွင်သာ မြေပေါ်ကန်များ၊ မြစ်ချောင်းများက မြေအောက်ရေကို ဖြည့်တင်းနိုင်ပါသည်။
(ဥပမာ – ရန်ကုန်မြို့တွင် အင်းယားကန်မှ စိမ့်ရေကို အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းရိ စက်ရေတွင်း (အ၀ိစီတွင်း) များသည် မြေအောက်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရေအဖြစ် လက္ခံရရှိကြပါသည်။)
ဧရာဝတီမြစ်သည် မိုင်ပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး အရှည်ဆုံးနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အသုံးဝင်ဆုံး၊ အကျိုးအပြုဆုံး မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေအများဆုံးသည် ဧရာဝတီမြစ်ရိုး ၊မြစ်ကမ်းတလျောက် နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရာ ဧရာဝတီမြစ်ရေသည်လည်း လူတို့၏ သောက်သုံးရေ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါမြစ်ရေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အစဉ်သန့်ရှင်းကြည်လင်ရန် လွန်စွာအရေးကြီးပေသည်။ မြစ်ကမ်းနား တလျောက်ရှိ မြို့အများစုသည် မြစ်ရေကိုသောက်သုံးရေအဖြစ် အသုံးပြုနေကြရပါသည်။
နေရာဒေသအများစုတွင် မြေပေါ်ရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ် အများအပြားအသုံးပြုနေကြပါသည် ။ မြေပေါ်ရေရရှိ့်မှု အလားအလာ နည်းပါးသည့်နေရာဒေသများနှင့် မြေပေါ်ရေနှင့် ဝေးလွန်းသည့်နေရာဒေသ များတွင်သာ မြေအောက်ရေကို ထုတ်ယူအသုံးပြုကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ်သုံးစွဲနိုင်သော မြေပေါ်ရေ အရင်းအမြစ် ကုဗကီလိုမီတာပေါင်း ၁၀၈၀ နှင့် မြေအောက်ရေ အရင်းအမြစ် ကုဗကီလိုမီတာပေါင်း ၄၉၅ ရှိပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေအသုံးပြုမှုမှာ စုစုပေါင်းရေသုံးစွဲမှုပမာဏ၏ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး စက်ရုံအလုပ်ရုံနှင့် အများပြည်သူ သောက်သူံးရေမှာ ၁၀% ခန့်ရှိပ်ါသည်။ အဆိုပါအရေအတွက်အတွက်မှာ နှစ်စဉ် ရေသုံးစွဲနိုင်သော ရေအရင်းအမြစ်ပမာဏ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းခ့န်သာ ရှိပါသေးသည်။
သိုပါ၍ အဆိုပါရေအရင်းအမြစ်များ ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ အစဉ်သဖြင့် သန့်ရှင်းသော၊ သောက်သုံးရန် စိတ်ချရသောရေ ဖြစ်နေရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာအစီုးရ၊ အဖွဲ့အစည်းများက စနစ်တကျထိမ်းသိမ်း၊ စီမံခန့်ခွဲ၍ အသုံးပြုစေခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သိုမှသာမြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ရာသီဥတုဖေါက်ပြန်ပြောင်းလွဲမှုများကြောင့် သောက်သုံးရေအခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရမည့်ဘေးက ကင်းဝေးပေမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ယ္ခုအခါ သန်း ၆၀ ကျော်ရှိနေပါသည်။ လူဦးရေ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြို့ပြနေလူထုဖြစ်ပြီး မြို့နေလူဦရေ တိုးမြင့်နှုန်းမှာ ၂.၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ လူဦရေ မွေးဖွားနှုန်းမှာ ၂ ရာခိုင်နှုံးခန့် ရှိပါသည်။ လူဦးရေ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ သောက်သုံးရေလိုအပ်မှုသည်လည်း ပို၍ပို၍ များလာမည်ဖြစ်ပေသည်။ နောင်အနှစ် ၂၀ ကျော်ကာလတွင် သန်း ၈၀ မကျော်ဟုမ ည်သူမျှမပြောနိုင်ပေ။
ရာသီဥတုမှာ ပူအိုက်စွတ်စိုသော မုတ်သုန် ရာသီဥတုဖြစ်ပြီး အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေကြောင့် မေလမှ အောက်တိုဘာလအထိ် မိုးရာသွန်းမှု များပြားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုးရွာသွင်းမှုမှာ ကန်ရိုးတန်းဒေသများသည် မိုးရေချိန်လက္မ ၂၀၀ ခန့်သာရွာသွန်ပြီး၊ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်း၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် လက္မ ၉၀ ကျော်ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းသည် မိုးအနည်းဆုံးရပ်ဝန်း အနေနှင့် မိုးရေချိန်လက္မ ၄၀ ခန့်သာ ရွာသွန်း ပါသည်။
သို့ပါ၍ သတိထားစရာအချက်မှာ-မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာမည့်ဆယ်စုနှစ်ကာလနှင့် နောက်ပိုင်းတွင်မှတ်သုံကာလသည် ပုံမှန်လက်ရှိအချိန် ကာလထက် ပိုမိုလျော့နည်းလာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရက်ပေါင်း ၄၀ ခန့်မျှ လျော့နည်းမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကြောင့် သောက်သုံးရေရရှိရေးမှာလည်း အခက်အခဲများ ကြုံတွေလာနိုင်ကြောင်း ဗွီိအိုအေမြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်၊ သိပံ္ပနှင့် နည်းပညာကဏ္ဌ၌ ECODEV အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်၌ ဆွေးနွေးထားပါသည်။
အဆိုပါအချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ သောက်သုံးရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ အခက်အခဲရှိလာနိုင်စရာ အကြောင်းများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်၍ရနိုင်ပါသည်။
ထိုအပြင် ကမ္ဘာဘဏ်က၊ နိုဝင်ဘာ(၁၈)ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာအရ ကမ္ဘာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဘက်တွင် ပင်လယ်ရေမျက်နာပြင်သည် ၃ ပေ အထိ တက်လာနှိင်ကြောင်း ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းသတိပေးချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနေ ပြည်သူများနှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအချို့အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးပါသည်။ ချောင်းသာ၊ ငပလီ စသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၏ အရေးကြီးသောနေရာများရှိနေသည့်အတွက် လုပ်ငန်း များ မထိခိုက်နိုင်အောင် လိုအပ်သည့်ပြင်ဆင်မှုများ၊ သောက်သုံးရေအတွက်အပါ ကြိုတင်ပြင် ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် အလေးထားဂရုပြုရမည့်အကြောင်းအရာ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ မြေပေါ်ရေ အရင်းအမြစ် များ (မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်) ၏ ရေအရည်အသွေး ပျက်စီး ယိုယွန်းစေနိုင်သော၊ ရေအရင်းအမြစ်များ လျော့နည်းခမ်းခြောက်သွားစေမည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုပ်လုပ်သည့် အဆောက်အဦများ၊ ဓါတ်သတ္တုထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများအား အဆိုပါ ရေအရင်းအမြစ်များ၏ အနီအနားနှင့် မြစ်ညာအရပ်ဒေသ (ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ (မေခ၊ မေလိခ)။ ပထမမြစ်ကျင်း၊ သပိတ်ကျင်းဒေသ၊ ချင်းတွင်းမြစ် အထက်ပိုင်းနှင့် မုံရွာဒေသ (သတ္တုတွင်းများ တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ရာဒေသများ၊ မြစ်လက်တက်များ အနီအနား)။ စစ်တောင်းမြစ် အထက်ပိုင်း(ဥပမာ – မိုးထိ၊ မိုးမိဒေသများ) တွင်လုပ်ဆောင်းခြင်းကို ဂရုပြုရပါမည်။
နိုင်ငံစီပွားအတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါကလည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ အရင်းအမြစ်များ မပျက်စီး မယိုယွင်းစေမည့်နည်းစနစ်၊ ပုံထုပ် (Production; It’s Safe-environmental Design and Construction) လုပ်ဆောင်ခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ လုပ်လက်စခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းများကို ထိုသို့လုပ်ဆောင်စေပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
လက်ပံတောင်းတောင်း သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ယ္ခုလက်ရှိ ထုတ်လုပ်နေသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့် လုပ်ကိုင်နေခြင်းထက်တိုးတက်နေသောနိုင်ငံများ (ဥပမာ၊ ၊ Australia, United State) တွင် ထုတ်လုပ်သည့် လူနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မြေပေါ်မြေအောက်ရေ အရင်းအမြစ် များကို မထိခိုက်စေသည့် နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ္တုတွင်းတခု၏ အဓိကအချက်မှာ သတ္တုထုတ်လုပ်ရာ မှဖြစ်ပေါ်လါသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် လေထု၊ မြေပေါ်ရေ၊ မြေအောက်ရေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ သစ်ပင်သီးနှံများ မပျက်စီး၊ မယိုယွင်းစေဘို့၊ အနီးအနားနေပြည်သူများ ကျမ္မာရေး မထိခိုက်စေဘို့ အဓိကဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ သတ္တုတွင်းမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများအဖြစ် မြေပေါ်ရေနှင့် မြေအောက်ရေတို့ကို ညစ်ညမ်းစေပြီး လေထုကိုလည်း ညစ်ညမ်းနိုင် စေပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ကျမ္မာရေးကိုလည်း ဆိုးဝါးစေပါမည်။ မြေပေါ်ရေဖြစ်သည့် ချင်းတွင်းနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ရေတို့ကို ရေအရည်အသွေး ပျက်စီးယိုယွင်းစေခြင်းဖြင့် ချင်းတွင်းနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတလျှောက်နေ ထိုင် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြကုန်သော ပြည်သူပြည်သားများ ကျန်မာရေးချို့ယွင်းကာ နိုင်ငံအနေနှင့်လည်း ကောင်းကျိုးများ ဖြစ်မလာနှိ်င်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတ္တုတွင်းတခု၏ ထုတ်လုပ်မှုကာလသည် ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ် မဟုတ်ပါ။ ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်မှ ဆယ်စုနှစ် များစွာ ကြာမြင့်ပါသည်။
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်လည်း လူနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရေသယံဇာတကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ ထိခိုက်ခံစားနိုင်ပါသည်။
ထိုအပြင်လေးမြို့မြစ်သည် ပေ ၅၀၀၀ ကျော်မြင့်သော ချင်း တောင်တန်းမှ မြစ်ဖျားခံစီးဆင်းလာသော မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ချင်းပြည်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်မှမြောက်ဦးမြို့နယ်အထိ ရေချို(သောက်သုံးရေ) ရရှိသော မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါ မြစ်ညာအထက်ပိုင်း (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်းနယ်မြေ / Mine Area of Construction raw material) နေ စီးပွားရေးသ္မားများက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အဆိုပါမြစ်အတွင်း စည်းမဲ့စွာပစ်ချခြင်း၊ကျောက်ထုလုပ်ငန်းကိုအလွယ်တကူမြစ်ချောင်းအ တွင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် မြစ်ရေများ နောက်ကျိ နေပြီး ရေအရည်အသွေး ယိုယွင်းလာ၍ အောက်ပိုင်းနေ ပြည်သူပြည်သားများ အတွက် သောက်သုံးရေကိုညစ်ညမ်းစေခြင်းဖြင့် မလိုလားသော ကျမ္မာရေးအန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့လာနိုင်ကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်လာကြောင်း ကိုလည်း မြစ်မခဂျာနယ်တွင် ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ ထိုအခြင်းအရာများ ကို ပြုပြင်စေခြင်းဖြင့် လေးမြို့မြစ်သည် အစဉ်သန့်ရှင်းနေပေမည်။
အဓိကအချက်မှာ၊ ဧရာဝတီမြစ်ရေ၊ ချင်းတွင်းမြစ်ရေတို့သည် အင်မတန်အရေးကြီးသော ရေအရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ရေကြောင်းခရီးကုန်စည်ကူးသန်းသွားလာရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ထွန်းနေသောနေရာလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် မေခ မေလိခ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံသည် သဘာဝအတိုင်း ရှိနေသင့်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘူမိသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငအတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ၊ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အင်မတန်ရှားပါးသော ဘူမိပတ်ဝန်းကျင် (Geo-environment) ဒေသရပ်ဝန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦရေတိုးနှုန်းအရ လူဦရေသန်း ၆၀ ကျော်မှ သက္ကရာဇ်၊ ၂၀၂၅ တွင် သန်း ၈၀ ခန့် ဖြစ်လာနိုင် ချေ ရှိပါသည်။ သို့သော် သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များ၏ ရေထုကမာဏမှာ တိုး၍ လာမည်မဟုတ်ပါ။ ပတ်ဝန်ကျင်ညစ်ညမ်း မှုကြောင့် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေပမာဏ လျော့နည်းမည်သာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေအရင်းအမြစ် ပေါများစွာရှိသော်လည်း အားလုံးသော ရေအရင်းအမြစ်များသည် သောက်သုံး၍ မရနိုင်ပါ။
လူတိုအတွက် သောက်ရေ၊ သုံးရေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံသုံးရေ၊ လူမှုပတ်ဝန်ကျင်အတွက်သုံးရေ တို့မှာ ပေါများစွာရှိသည်ဟု မှတ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။ သို့ပါ၍ လက်ရှိသောက်သုံး၍ရနိုင်သောရေကို ရေအရည်အသွေး မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ရန်၊ ရေရှည်အသုံးပြု၍ရနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရန် အရေးကြီးပေသည် ။ မြေပေါ်မြေအောက် ရေအရင်းအမြစ်မှာ သဘာဝအလျောက်ဖြစ်တည်နေသော အရာများ ဖြစ်ပေသည်။
မြို့သစ်များတိုးချဲ့ခြင်း၊ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများအတွက် စက်မှုဇုံများ တည်ထောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် သောက်သုံးရေ လုံလုံလောက်လောက် ရရှိနိုင်မည့် ရေအရင်းအမြစ်များနှင့် နီးသည့်နေရာများကိုသာ ဦးစားပေး စဉ်းစားသင့်ပါသည်။(ဥပမာ – မဟာရန်ကုန်မြို့ တိုးချဲ့ရေး အစီအစဉ်တွင် လက်ရှိ မဟာရန်ကုန်ဧရိယာကို တိုးချဲမည့်အစား ရန်ကုန်မြို့နယ်နမိတ်နှင့် အလမ်းမဝေးသည့်နေရာ (ဥပမာ -လေဆိပ်အနီး၊ ပဲခူးရိုးမတောင်ခြေ၊ မြေပြန့်ဆင်ခြေလျော နေရာမျိုး)မျိုးကို စဉ်းစားခြင်းက ပိုကောင်းပါသည် ။
မြေပေါ်မြေအောက် ရေအရင်းအမြစ်နှစ်မျိုးစလုံး ရနိုင်သောနေရာ (သို့) မြေပေါ်ရေ အရင်းအမြစ် လုံလုံလောက်လောက်ရနိုင်သောနေရာမျိုးကို စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှု၊ မိုးရွာသွန်းမှု အနည်းအများ၊ ရေသိုလှောင်နိုင်မှု အခြေအနေ၊ နေရာအကျယ်အ၀န်း စသည်တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရပါမည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းတို့မှာ လူတို့ လုပ်ယူ၍ရသော အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြစ်ကြပါသည်။
မြို့ရွာရပ်ကွက်ရေပေးရေးနှင့် စက်မှုဇုံများ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရေပေးဝေခြင်းကို ကဏ္ဍတခုစီ လုပ်ဆောင်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန် ပြည့်စုံမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ သောက်သုံးရေသုံးစွဲလာနှုန်းသည် မည်ရွေ့ မည်မျှဖြစ်ပြီး၊ အခြားလုပ်ငန်းများ၏ ရေသုံးစွဲမှုပမာဏကိုလည်း ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် စနစ်တကျသိရှိရပြီး နိုင်ငံတော်၏ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံအချက်အလက်အနေနှင့် အသုံးပြု၍ ရရှိမည်ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ပြင် စက်မှုဇုံများမှ စွန့်ပစ်ရေဆိုးများကို စနစ်တကျသန့်စင်စေပြီး စွန့်ပစ်ရေကိုလည်း စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် သန့်စင်ပြီး ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ပါက ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှုကို ထိန်းချုပ်စေခြင်းနှင့်အတူ ရေကို အလေအလွင့် နည်းပါးစေပါမည်။ (စွန့်ပစ်ရေကို သန့်စင်သည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ စံချိန်စံညွန်း၊ မီမမီ သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်အဖွဲအစည်း (သို့) ဌာနဆိုင်ရာများက စစ်ဆေးရပါသည်။)
မိုးများသည့်ဒေသများတွင် မိုးရေကို စနစ်တကျ သိုလှောင်သုံးစွဲသည့် အလေ့အကျင့်များ အသုံးပြု သင့်ပါသည်။ (ယ္ခုအခါ တိုးတက်သော အာရှနိုင်ငံတစ်ဖြစ်သည့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ကျွန်းတခု တွင် အိမ်တိုင်း၊ အိမ်တိုင်းတွင် တနိုင်တပိုင်၊ မိုးရေကိုလှောင်၍ သောက်သုံးရေအဖြစ် အသုံးပြုနေကြပါပြီး။) မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် ကန်းရိုတန်း ရေငန်ဒေသများတွင် ပြု လုပ်၍ ရရှိနိုင်ပါမည်။ (နိုင်ငံတကါတွင် ပြုလုပ်သည့်နည်းပညာများ လိုအပ်ပါက ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။)
ရေအရင်းအမြစ်များ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၀န်ဆောင်မှုပြုလုပ်ပေးသူ (ရေထုတ်လုပ်ပေးသူ (သို့) ကန်ထရိုက်တာ)၊ သုံးစွဲသူ (ပြည်သူလူထု(သို့) လုပ်ငန်းရှင်)၊ ၀န်ဆောင်ခွင့်ပြုသူ၊ (အစီုးရ၊ အဖွဲအစည်း၊) တို့အားလုံးနှင့် အကြုံးဝင်သည့်အပြင် လူမှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း နည်းဥပဒေများကို တိုးတက်လာသော ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ တတ်သည့် နားလည်သောပညာရှင်များ (ဇလဘူမိဗေဒပညာရှင်၊ ဇလဗေဒပညာရှင်၊ မြိုပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ဥပဒေပညာရှင်၊ တွင်းတူးစက်မှုအင်ဂျင်နီယာ) က ဦးဆောင်၍ လက်ရှိဥပဒေများကို အခြေခံပြီး ပြုစုပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါမည်။
လက်ရှိဥပဒေများထက် ပြည်စုံလုံလောက်သည့် ဥပဒေများ၊ ခေတ်စနစ်နှင့်အညီရှိသင့်ပါပြီ ထိုသို့ဥပဒေပြုစုရာတွင် မြေပေါ်ရေနှင့် မြေအောက်ကို ခွဲခြား၍ ဥပဒေများ ပြုစုသင့်ပါသည်။ (စာရေးသူသည် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးရွာရေရရှိရေးဌာန (စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန) တို့တွင်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆယ်စုနှစ်၂ ခု ခန့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့် သောက်သုံးရေ၊ စိုက်ပျိုးရေနှင့် ပတ်သက် သော စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို အတိုင်းအတာတခုထိသိရှိနားလည်ခဲ့ပါသည်၊)
ယ္ခုအခါ တိုးတက်သောနိုင်ငံအများ၏ အစီုးရများသည် နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရေး ၊ စီမံကိန်း ရေးဆွဲစဉ်ကတည်းက လူုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရေအရင်းအမြစ်များ မပျက်စီးရေးကို အဓိကထား ပုံစံထုတ်၊ ဆောက်လုပ်ကြပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ဆိုးရွားရာမှုများကို ကြိုတင်တွေးဆ အလုပ်လုပ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တိုးတက်သောနိုင်ငံများတွင် ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရာ၌ တတ်သိနားလည်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (Geologist, Geo-environmental Engineer, MiningGeologist, Mining Engineer, Hydro-geologist, Geotechnical Engineer, Mining Blasting Specialist, Public health and SanitationEngineer, Environmental engineer, Forest Specialist and etc.) နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သိုသော ပညာရှင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ (အသက် ၅၅ နှစ်ကျော် အထက်)၊ များစွာရှိပါသေးသည်။
အထက်တွင် ညွန်းဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိသောက်သုံးရေရရှိမှု၊ သုံးစွဲမှုနှင့် ရာသီဥတု၊ မိုးလေ၀သတို့ကို အခြေခံ၍ နောင်အနှစ် ၃၀ – ၅၀ စသည်ဖြင့် နှစ်ရှည်နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများကို တတ်ကျွမ်း နားလည်သည့် ပညာရှင်များ ဦဆောင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖေါ်သင့်ပါသည်။ သို့မှသာ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလွဲမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်သော်လည်း ပြည်သူလူထုအတွက် သောက်သုံးရေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံသုံးရေ၊ စိုက်ပျိုးရေများ စနစ်တကျ တည်ရှိနေပေသည်။
(Source::USGS; Water Resources , Burma Resources(Wikipedia) Free Encyclopedia; water Static Myanmar (SEASIA 2011)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Maung Kyay Yay, မှတ်စုမှတ်တမ်း, သတင်းဆောင်းပါး, လောကဓာတ်ခန်း
4 Responses to ကမ္ဘာ့ရေ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြန်မာပြည်
မောင်ပျာလောင် on December 18, 2012 at 3:18 am
မောင်ကျေးရေ ရဲ့ ကမ္ဘာ့ရေ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြန်မာပြည် ဆောင်းပါးဟာအလွန်တန်ဘိုးရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်း စာဆောင်များ မှာလည်းထည့်သွင်ပြီး လူထုပညာပေး ဟောပြောပွဲများလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ အထူးပညာပေးစာဆောင်ဖြစ် သည့်အတွက် စာတည်းအဖွဲဖြင့်ပြင်ဆင်သင့်ပါသည် (အကြံပြုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်၊ ဆရာလုပ်ထာမဟုတ်ပါ)။ ကျနော်လို စပယ်တစ်ယောက်အနေနှင့် သတ်ပုံသတ်ညွှန်းများ ရေးထုံးနှင့်မညီတာကို ငပျာလောင်ဘဲလို့ စာဖတ်သူများနားလည်နိုင်ပါ သည်။ သို့ သော် မောင်ကျေးရေ ရဲ့စာတန်းဟာ နောင်လာနောင်သားများအတွက် နမူနာရှေ့ ပြေးဖြစ်နေတာကြောင့်၊ စာတည်းတစ်ဦးဦးကိုပြပြီးမှ ထုပ်ဝေလျှင်ပိုပြီးမကောင်းဘူးလား။ ဥပမာ၊ မုတ်သုန် ကို မှုတ်သန်၊ မှတ်သုံကာလ စသည်ဖြင့် တွေ့ ရပါသည်။ တချို့ နေရာများမှာလည်း ရေးထုံးမဟုတ်သည့် – ကာ ကို ကါ ၊ လာ ကို လါ သုံးထားပါသည် (အထူးအကြောင်းကြောင့် သုံးထားသည်ဆိုပါလျှင် ၊ ကျနော့၏အမှားကိုခွင့်လွှတ်ပါ) ။ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဖြစ်တပ်ပါသည်။ အချိန်၏ခဲရာခဲစစ်များကြောင့် စာတန်းကိုပြန်လည်မစစ်ဆေးနိုင်ခြင်များကိုလည်း စာတန်းရှင်အစား၊ စာရှု့ သူများ နားလယ်သဘောပေါက်ကြမည်ဟုထင်ပါသည်။ စာတန်းရှင်ဆက်လက်၍ ပြုစုနိုင်ပါစေ – – –
admin on December 18, 2012 at 8:54 am
ဲပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ပီဒီအက်ဖ်နဲ့လည်း ထုတ်ပြန်ပေးပါဦးမယ်။ အများသူငှာ ရှယ်လို့ရအောင်ပေါ့
Ko Toe on December 19, 2012 at 6:10 am
Our people need such kind of knowledge. We have to share this article asaduty of all citizens, as possible as we can through all of the social network such as journal, TV, news paper etc… There wasaMyanmar saying ” rice can survive for our lifeaweek, but wateramorning. In our quarter.when the public water valve doesnot coming out water, we urge that the water is the most important for daily routine life.. They pop out justawords, no deeply hearted mind and thinking. Actually, the hidden problem behind the sence is more bigger than they can see, more danger than all of their problem.
So. The person who had been read this article, what you get knowledge from this article and try to share and explain it the title of water and our future.
myint thein on December 22, 2012 at 3:52 am
Dear maung Pyar Laung, I am Maung Kyay Yay, warmly welcome and many thanks your comend;I accept your commend and agreed with you because this is my beginning of newletters writing in Myanmar language. I left Yangon to survive after quit the government position since 1993.I was away from our own language writing because I was working in geotechnical and geoenvironmental engineering construction industries in oversea from that time to early 2012.Now I am retired and stay at my daughter home to take mediacare, by the time I start writing newletters in Myanmar Language. Next time I take care seriously and I am warmly welcome your commend always. AND request to excuse my late reply to you. Best Regrads, maung kyay yay